Hiran State - News: Xukumada Farmaajo oo aduunyada ka dhaadhicineysa in qilaafka ka jira ku ekyahaya labada Shariif
Xukumada Farmaajo oo aduunyada ka dhaadhicineysa in qilaafka ka jira ku ekyahaya labada Shariif
Mogdisho:(hiranstate.com)- R/wasaare Farmaajo iyo golahiisa wasiirada oo maalmahani beesha caalamka ka dhaadhicnayey iney ku qanciyaan inuusan jirin qilaaf dhex yaala ha'yaddaha kala duwan ee dowlada ayaa hada beesha caalamka ku qancinayo in qilaafku ku ek yahay labada Shariif.
Arintaan ayaa wax aa maalmahani ka soo shaqeynayey wasiiro u badan qurbo joog oo dhawr ah. waxeyna xooga saarayaan sidii ay aduunyada u tusin lahaayeen in waxa is heysta ay yahiin madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka si labadoodaba loo tusiyo beesha calamka iney qas wadayaal yahiin.
Dhinaca kale xukumada Farmaajo ayaa hada waxoogaa damac ah galay iyagoo olole ugu jira in hal sano loogu daro waqtiga ay xukumadani jireyso. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Farmaajo iyo xukumadiisa oo horey ugu fashilmay iney ka dhabeeyaan go,aankoodii 100 maalmood ahaa si aan loo hor geyn mudanayaasha baarlamaanka oo aan loola xisaabtamin ayey maanta xukun jaceyl heerka laga gaaray ayey leeyahiin hal sano ayaanu dooneynaa ayuu yiri Muuse oo ka mid ah dhaliinyarada aadka u taageersan xukumada Farmaajo.
Isagoo sii hadlayo waxuu yiri waxaan la yaabanahay waqtiga xukumadeena ay galineyso in mudada loo kordhiyo mey Mogdihso ku sifeyso oo ay ka dhabeyso 100 kii maalmood ee ay horey u qabsatay oo maanta mareyso 140 maalmood ku dhawaad.
Dhianca kale madaxweyne Shiikh Shariif oo si waadax ah loogu sheegay in ay doorashu dhaceyso waqtigii loogu talo galay mar uu dhawaantan safar ku tagay wadamo Bariga Africa ah oo ay ku jirto Ethiopia ayaa ka mid noqday shaqsiyaadka isku taagay inuu u tarmo hogaanka dalka ugu sareeya taasi oo ka xanaajisay xukumada Farmaajo iyo golahiisa wasiirada oo iyagu isku arka iney waxa Mogdisho iyo Somaliya joogo oo dhan ka aqli badan yahiin oo ay iyagu yahiin aqoonyahano dibada ka tagay oo labada Shariif meesha si sahlan uga saari kara iyagoo aduunyada u tusinaya in qilaafka dowlada uu ku ek yahay labada Shariif.
Waxaa kale oo iyaduna xusuus u baahan kedib markii culimada Ahalusuna Shiikh u hadlay maanta sheegay ineysan jirin wax xiriir ah oo dowlada iyo gobolada dhexe ka dhaxeeya isagoo taasi bedelkeediina sheegay in TFGda iyo Ethiopia ay aad iskugu dhaw yahiin Ethiopia oo ay ka helaan waxii ay u baahan yahiin.
Marka dhinac kasta laga eego arimaha Somaliya xukumada Farmajo hadii aan la dhaheyn waa aqoonyahano qurbaha ka tagay waana muwaadiniin Somaliyeed dhinac kasta wey ku fashilmeen mana u muuqdaan kuwo kasban kara bulshada Somaliyeed marba hadii 70 jiro Somaliyeed ay maanta leeyahiin dowlada Somaliya iyo mida Ethiopia waxaan kaalmo ka helnaa Ethiopia.
Waa yaabe xukunku macaan badanaa midkasta maxaa looga fujin waayaa ayey tiri hooyo Somaliyeed oo qurbaha ku nool oo isku diyaarineysay iney dib ugu laabato marka ay xukumadu gacanta ku dhigaan magaalada Mogdisho kedib markii ay 100 maalmood qabsadeen dadkuna ay ka rajo dhigeen balan qaadkoodii ugu horeyey maadama ay fulin waayeen.
Gudoomiyaha baarlamaanka oo si wanaagsan ula socda wasiiradan qurbaha ka yimid iyo R/wasaare Farmaajo ayaa ku gacan seyray shir ay ka codsadeen dhamaadkii isbuucii hore si ay marka uu shirka yimaado sawiro uga qaataan si ay aduunyada u tusiyaan iney heshiis ka dhax wadaan labada shariif. arinta dhan hada waxey ka dhigeen mid u dhaxeysa labada Shariif.
la soco jidka ay ku dhamaan doonto xukumada Farmaajo iyo golaheeda wasiirada ee qurbo joogta u badan oo noloshooda intii ugu badneyd qurbaha ku soo dhameystay hadana jagooyin ay waxoogaa nolol ah ku heli karaan ku heysta dalka Somaliya si ay u sii xoojistaane hada xusul duub ugu jira sanad hor leh inye ka dhax qaraabtaan.
· admin on April 24 2011 20:42:38 · 0 Comments · 1795 Reads ·
14,667,554 unique visits